UMahasiah yiNgelosi yoMgcini yoXolo kunye neMvisiswano - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
UMahasaya yingelosi yesihlanu. Uyingelosi yakho ekugcinayo ukuba uzalwe phakathi kwe-10 ne-14 ku-Epreli. Funda indlela yokunxibelelana naye.
Ukuba uzalwe phakathi kwe-10 ne-14 ka-Epreli, ingelosi yakho ekugcinayo nguMahasiah, okuthetha ukuthi 'uMsindisi kaThixo. Ngaphantsi komqondiso weeAries, le ngelosi ingumfazi inamandla amakhulu. Ufuzisela ukuvisisana noxolo, okuthetha ukuba usikelela abantu bakowabo ngenqanaba elifanelekileyo lokuzola. Abemi baseMahasiah bayathandeka, abantu abanomdla abonwabela iziyolo ezilula zobomi. Ingelosi ke iyabongozwa ukuba ifune uxolo lwangaphakathi, ukunyamezelana, kodwa kunye nokuphefumlelwa. Uncedo olukhulu xa kuziwa ekoyiseni uloyiko kunye nokusombulula iimbambano zangaphakathi. Fumanisa yonke into oyifunayo malunga naye, apha.
UMahasiah, ingelosi engumgcini yama-Aries (ukusuka nge-10 ukuya kwi-14 ku-Epreli)
Ukubonelela ngezixhobo ekufundeni, ekugcineni nasekuqondeni, ngakumbi ekukhululekeni kwiilwimi zasemzini, uMahasiah wenza ukuba umntu aphumelele kwizifundo, ukhuphiswano okanye ukhetho. IMahasiah ijolise kuyo ukulungiswa ukulungisa ngaphambi kokuba izinto zihambe kakubi.
Ukuqonda ngakumbi kwiMahasiah:
Uthando, indalo, ubukrelekrele, uxolo, Karma
Keter oko kuthetha isithsaba, kunye neTiferet oko kuthetha ubuhle
Indigo kunye neTurquoise
I-Neptune kunye neJupiter
Zeziphi iimpawu asikelelwe ngazo nguMahasiah?
UMahasiah yingelosi engumfazi efuzisela uxolo kwaye imvisiswano . Uzisa ukuzola kwaye i amandla okufunda . Umntu ozelwe phantsi kwempembelelo yakhe uhlala enobuntu obuhle ngaphakathi nangaphandle, uyathandeka kwaye uyabuthanda ubumnandi obunyanisekileyo. Mahasiah ubizelwe kuye fumana inkuthazo nokunyamezelana okukhulu , kodwa ikwayingelosi ekhuselekileyo ekwaziyo ukusinceda siphumelele amadabi ethu angaphakathi kwaye ekugqibeleni senze uxolo nathi.
Yenza i-gemini kunye ne-leo dibana
Isizathu sokuba ubize kuMahasiah
Ingelosi Mahasiah Unceda ukulungisa iimpazamo ezenziwe kwixesha elidlulileyo . Ukunxibelelana naye kuthetha ukuqinisekiswa ngokuthatha indlela elungileyo kwaye Ukufumanisa kwakhona ukuzimisela kunye nesibindi sokusebenza nzima kunye nokuphucula , ngokomoya nangokwenyama. Le ngelosi ingumlondolozi inika amandla okuziphatha angenakuthelekiswa nanto akuvumela yenza inkqubela kwaye yimani niqinile , nokuba ujongene nokungaphephekiyo.
Ingelosi yoxolo kodwa yokufunda , ungambiza ukuba afumane uncedo ngexesha leemviwo.
Ingelosi Mahasiah ibonelela:
Amandla okulungisa iimpazamo zakho
Ukukwazi ukwenza ngcono
Amandla amakhulu okuziphatha
Inkxaso ngexesha leemviwo ngokwandisa inkumbulo
zithini iinombolo zam zengelosi
Unxibelelana njani noMahasiah?
Ukuba uMahasiah yingelosi yakho ekugcinayo, unganxibelelana naye ngeentsuku zakhe kunye neeyure zokuzimisela, nge-25 kaMatshi, nge-7 kaJuni, nge-21 ka-Agasti, nge-2 kaNovemba, nge-13 kaJanuwari, phakathi ko-01: 20 no-01: 40.
Ukunxibelelana nengelosi yakho ekugcinayo, yitsho lo mthandazo ngentlaka yokuqhumisa:
Musa ukuvumela, Mnumzana, ubuhle kunye namandla owafakela emphefumlweni wam ukuba abe ngumqobo kuphuhliso lwam.
Ndincede ndiqonde ukuba, ukuze ndiphumelele, ndifuna ukuxolelaniswa nabo, ngaphambili, babengamaqabane am obomi; abahlobo neentshaba.
Ndivumele, ngelosi ethandwa kakhulu, ukuba ndoyise ubunzima ukuze ndikwazi ukubona imbandezelo.
Kwaye, xa iintlobo zakho zicoce zonke iimbombo zobuntu bam, ndamkele, Mahasiah, njengomlungiseleli wakho emhlabeni, njengomthandi wothando, uxolo kunye nobutyebi bokomoya kunye nobutyebi obumele kwaye ondinike bona.
Unyaka ka-2020 kuVavanyo olusekwe kwiPhawu lweZodiac yakho
IJupiter kwiiPisces ngoMeyi 14: Ubutyebi bakho buphambili kwimpilo yakho
ukubala ngamanani karmic sokubala amatyala
ukubaluleka kwenombolo 8
I-1414 ingelosi inombolo yewele ilangatye
intsingiselo yebhayibhile ye-1234